I-VIDEO: Idrone indiza ngaphezu kokuqhekeka kwe-40km e-Antarctica | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IVIDIYO: Idrone indiza phezu komfantu ongu-40km ovele e-Antarctica
I-Antarctica iyancibilika. Njengoba izinga lokushisa lomhlaba linyuka ngenxa yokuphuma okungalawuleki kwamagesi abamba ukushisa, iqhwa liyancibilika kube sengathi yi-ayisikhilimu ekhanyiswe yilanga lasehlobo elinamandla.
ENingizimu Pole sekuqala ukuba nobufakazi obudlulele ngokwengeziwe bokuguquka kwesimo sezulu. Owokugcina uthi umfantu omkhulu ophindwe kabili ubude ezinyangeni ezintathu nje, futhi okurekhodwe yidrone yeBritish Antarctic Survey, inhlangano yesayensi enesizinda sokucwaninga unomphela e-Antarctica esibizwa ngeHalley VI.
Ukuqhekeka kwe-Halloween, njengoba ososayensi bekubiza kanjalo, Ingamakhilomitha angama-40 ubude futhi kuphoqe ukuthi kukhishwe isizinda socwaningo ebesiseduze naso. Ngenhlanhla, iHalley VI yakhiwe ngamamojula ayisishiyagalombili angavaleka futhi adonswe kusetshenziswa imilenze ye-hydraulic efakwe eziqongweni zamaski, ngakho-ke ingasuswa kalula emifantwini evelayo.
Noma kunjalo, iqiniso lokuthi ziyavela ziyinkinga. Ekupheleni kwekhulu leminyaka izinga lokushisa kule ndawo yomhlaba lingakhuphuka ngama-6 degrees Celsius njengoba sishilo ku Lesi sihloko, okusho ukuthi, ingxenye yalokho okulindeleke ukuba ikwenze kuwo wonke umhlaba.
Ividiyo, eqoshwe yidrone evela eBritish Antarctic Survey, iyashaqisa impela. Ungabona kahle ukuqhekeka okukhulu okuvele e-Antarctica, izwekazi lapho vele ekuqaleni konyaka kutholakale ukuthi enye yeqhwa elikhulu kakhulu elibizwa ngeLarsen C selizophuka.
Ngakho-ke kudingekile ukuthatha izinyathelo ezisebenza ngempela ukulwa nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, hhayi e-Antarctica kuphela, kodwa nakuyo yonke iplanethi. Ukwehluleka ukwenza lokho kungaba nemiphumela eyinhlekelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » IVIDIYO: Idrone indiza phezu komfantu ongu-40km ovele e-Antarctica